गायिका आस्था राउतवि रुद्ध प्र हरीको ‘प्र तिशोध’
Homeमनोरञ्जनगायिका आस्था राउतवि रुद्ध प्र हरीको ‘प्र तिशोध’
काठमाडौं, माघ ८ । यही माघ १ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा चेकिङका क्रममा ज्याकेट खोल्ने विषयमा गायिका आस्था राउत र प्रहरी जवान रमिता श्रेष्ठबीच सामान्य विवाद भयो। विवाद तत्कालका लागि भनाभनमा गएर टुंगियो।
त्यही विषयमा पछि गायिका राउतले प्रहरीप्रति आक्रोश पोख्दै आफूलाई अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै गाली गरेर भिडियो फेसबुकमा राखेपछि फेरि विवाद सुरु भयो।
आस्थाको भिडियोले प्रहरी संगठनमा आँच पुगेको भन्दै प्रहरीले पनि विमानस्थलमा उनले महिला प्रहरीसँग झगडा गरेको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गरिदियो।
त्यसअघि नै आस्थाले गल्ती महसुस गर्दै फेसबुकमा बोलेका कुराप्रति माफी मागिसकेकी थिइन्। तर प्रहरी यतिबेला उनलाई जसरी पनि पक्राउ गर्न अग्रसर देखिएको छ।
प्रहरी जवान श्रेष्ठलाई उजुरी गर्न लगाएर अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दामा आस्थाविरुद्ध आइतबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। सामान्य विवादमा प्रहरी गायिका राउतविरुद्ध प्रतिशोधमा उत्रिएको भन्दै प्रहरी कदमको आलोचना भएको छ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेललाई यो विषय फौजदारी मुद्दा चलाउनैपर्ने विषय लाग्दैन।
‘मैले पनि एयरपोर्टको सीसीटीभी भिडियो हेरें,’ आयोगमा प्रहरीसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारीसमेत पाएका पौडेलले भने, ‘त्यो हेर्दा प्रहरी र गायिका दुवैको गल्ती देखिन्छ। त्यसकारण त्यत्तिकै आधारमा आपराधिक मुद्दा चलाउनु गलत हो।’
हामीलाई किन सबै उमेरका सा थी चाहिन्छ ?
लो कसेवाले सा र्वजनिक गर्‍यो लिखित प रीक्षाको न तिजा, को–को पा स भए ? [हेर्नुहोस् सूचना]
erectial disfunction buy ed pills from canada